Barcelona oo hogaanka u qaadatay saxiixa xiddig ay bartilmaameed ka dhigatay Chelsea - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Barcelona oo hogaanka u qaadatay saxiixa xiddig ay bartilmaameed ka dhigatay Chelsea
Barcelona oo hogaanka u qaadatay saxiixa xiddig ay bartilmaameed ka dhigatay Chelsea
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay xagaaga u dhaqaaqdo daafaca kooxda Porto Alex Telles, sida ay sheegayaan wararka.
Warbixinta ayaa sheegeysa in madaxweynaha kooxda Josep Bartomeu uu ku tilmaamay ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Brazil inuu yahay bedelka Junior Firpo.
Firpo ayaa kaga soo biiray kooxda reer Catalonia dhanka Real Betis 18 milyan euro xagaagii lasoo dhaafay, si kastaba ha ahaatee qaladaad badan oo waa weyn oo sameeyay ayaa dhalisay shaki ku aadan sida uu ku bedeli karo Jordi Alba.
Telles ayaa si xoogan loola xiriirinayay inuu isaga tagayo kooxda heysata horyaalnimada Primera Liga xagaagii lasoo dhaafay, iyadoo Barcelona, Juventus iyo Atletico Madrid dhamaantood ay xiiseynayaan.
Si kastaba ha ahaatee, uma badna inuu saxiixo qandaraas cusub bilaha soo socda, iyadoo qandaraaskiisa haatan uu dhacayo June 2021.
Haddii Porto ay doorato inay iska iibiso ciyaaryahanka, Barcelona ayaa laga doonayaa 35 milyan euro.
Bedel ahaan, Quique Setien wuxuu u muuqan karaa inuu keensato Emerson oo katirsan Real Betis haddii uu waayo saxiixa Alex Telles.
Previous articleWakiil su’aalo ka qabaa sida ay Chelsea ku heli karto saxiixeeda cusub ee Ziyech 1da JUly
Next articleUN fast tracks $10 million loan to scale up FAO action to fight Desert Locusts in East Africa